Mila miova aloha ny tena… hiovan’ny hafa | NewsMada
Mila miova aloha ny tena… hiovan’ny hafa
Mitohy ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19. Miara-dalana amin’izany, eo ny fizarana fanampiana eny ifotony ho an’ireo ao anatin’ny fahasahiranana noho ny fa­hamehana ara-pahasalamana. Tsy misy tsy sahirana amin’ izao?
Firarian’ny maro ny hitohizan’ny hetsika mandra-pitsahatry ny fihibohana ahay, ny mba hitondran’izany rivo-baovao ao anatin’izao fahasarotam-piainana na fahasem­porana izao, ny mba hiparitahany amin’ny rehetra tokony hisitraka…
Firariana izany fa miankina amin’ny enti-manana ihany. Eny, na tsy hovisavisaina na ndeha hatao hampionona amin’ny tsy fahafaham-po aza ny hoe: aleo misy kely toy izay tsy misy mihitsy. Fomba ny mitady, mitaraina, mangataka…
Na izany aza, mahavalalanina sy mahafanina kosa ny afitsoky ny sasany: toa tsy mety avokoa izay mitranga sy atao rehetra. Tsy misy ny mahafa-po na ny tonga lafatra. Nefa misy ny mila kisa amin’itsy sy iroa, mila voatsiary, mila ady aza.
Mila hovaina, hono, itsy; tokony hamboarina iroa. Lanja miakatra tokoa ny fiainana. Saingy famendrofendroana sy fanakorontanana no be ao an-dohan’ny sasany fa tsy fanatsaran-javatra velively amin’izay hahasoa… iombonana.
Tsy inona fa politika ankolaka na mivantana no antony? Fitadiavana sy fiadiana tombontsoa. Tsy eto an-toerana ihany io fa na ny avy any ivelany aza: mitsara ambony an’itsy sy iroa koa, manoro vohona… Nefa efa lasa ny zavatra taloha.
Ny tena tenenina hiova na hanova, na baikona amin’izany, na terena aza. Nefa izy tsy mahatsapa tena akory an’izay hiova na hanova ny fomba fanaony efa lany andro sy tsy mahomby na mandaitra intsony ny amin’izany?
Mampiharihary izany izao ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao? Na izay mahomby na tsia, na azo antoka na tsia… Tsy misy mahita kilema momba ny tena? Kapakapa vorombe sima: mijere tena vao manenitra (maneba­ka) olona?
“Atombohy amin’ny fiovana eo aminao izay tianao hiova amin’ny manodidina anao”, hoy ny filoha Indianina izay, i Gandhi.